Fametrahana ny mangarahara: mitaky ny antsipirian’ny karaman’ny mpitondra ny CCOC | NewsMada
Fametrahana ny mangarahara: mitaky ny antsipirian’ny karaman’ny mpitondra ny CCOC
“Mampahatsiahy ny adidin’ny fanjakana amin’ny fangaraharana manoloana ny vahoaka ny CCOC, ary manamafy ny tokony hampidirana ao anatin’ny lalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana ireto manaraka ireto, nefa tsy mbola hita ao ankehitriny : ny antsipiriany momba ny fitsinjarana ny vola, ny antsipiriany momba ny karama sy ny tambinkarama, ny solika sy ny fifandraisana an-telefaonina ary ny hofantrano.“
Io ny voalazan’ny firaisamonina sivily CCOC amin’ny fanambarany, nampitainy afakomaly, hoe: “Ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana, taona 2019: hitondra fiovana marina ho an’ny mponina?”, na mbola tsy misy sora-bola voafaritra aza momba ny politika ankapoben’ny fanjakana.
Mila fanazavana ny teti-bola
Raha ampitahaina ireo sehatra rehetra, sehatra 12 no misitraka fiakarana amin’ny teti-bolany 454,5 miliara Ar. Ny sehatra 26 ambiny, ahitana fidinan’ny tetibolany 244,5 miliara Ar. Ireo mahazo tombontsoa be indrindra: ny Fitantanam-bola sy ny tetibola (+219,7 miliara Ar), ny fiadidiana ny Repoblika (+58,6 miliara Ar), ny Tanora sy ny fanatanjahantena (+41,1 miliara Ar).
“Inona no mampitombina ny fitomboan’ny tetibolan’ireo sehatr’asam-panjakana ireo, ary maninona no ireo mitaha amin’ny minisitera hafa izay manana ny lanjany eo amin’ny fampandrosoana ny firenena?”, hoy ny CCOC.
Ahitana fihenan’ny tetibola kosa ny sehatra sosialy: ny Fanabeazana (- 33,8 miliara Ar), ny Rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana (- 27,9 miliara Ar), ny Fahasalamana (- 25,4 miliara Ar). Ireo sehatra telo ireo ve no anisan’ny mitondra fandrosoana amin’ny firenena toa an’i Madagasikara, ary naninona no nahena ny tetibola?
Ilaina ny filankevitra amin’ny daholobe
“Tokony hatao mazava tsara ny anton’ny fiovan’ny karama sy ny tambinkarama”, hoy ihany ny CCOC. Mangataka ny hanaovana filankevitra amin’ny daholobe ny faraisamonina sivily. Amin’izany, hamelabelatra ny tanjona sy ny vokatra andrasany ny minisitera tsirairay avy. Mba hanatsarana ny fiainan’ny vahoaka mialoha ny handaniana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana izany, ary mba hamelabelarana ny zava-bita amin’ny fiafaran’ny taom-pandaniana.